Published March 27, 2020 at 7:37 PM CDT
Lakkofsi jiraattota Sioux land dhukuba kanan qabaman dabalaa deemu jira. Akka sumas magaalota woodburry, Monona fi Dickinson County keesatti dhukuba Kanaan kan qabaman namaa 8 gahanii jiru. Namni haarawa qabaman hundu nama umrii 61 fi Sanaa olta’aniidha.
Akkasumas magaala woodburry county keessatti qormani Drive-through karona varasi Jimaata irra jalqabamuu isaa himame.
Garuu qoranno kun nama maraaf miti, namoota doktorooni jaraa akka qorataman ajajee qofaadha.
Magaala woodburry county keessatti dhukuba karono varasiin kan qabame nama 3 ta’uun himameera.
Kutaa Nebraska keesa dhukuba infuleenzaa irrati oduu bareeda jira. Akka CDC gabaasetti babal’inni dhukuba influenza magaala irra naanno tokkotti deebi’e jira. Akkasumas kuta South Dakotas sanuma. Garuu kutaan Iowa keesatti Infulunza kun babal’achu jira.
Akkasums lakkofsi Unemployment kan February har’a gadi dhiifame jira. Ji’a taree kutaa Iowa keesaatti kan argame 2.8% dha. Kutaa Nebraska keessati ammo 2.9% ta’uun isaa beekame.
Haata’u malee babal’inna dhukuba irra kan ka’e magaala suuland keessatti dalagaan dhaabachu irra kan ka’e umanii unemployment gutatu turban taree keesa baaye dabalee. Kutaa Iowa keessati namonin 42,000 gutate, waan torbaan taree calaa 17% dabalee.
Harkii guddan namoota 13,000 ol kanturas namoota mana nyaati fi dhugaati keesa kan dalagu ta’uun himame sababa mootuman March 17 akka cufamu godheef.
Guyyaa Kamisa, bulchaan magaala akaa jedhanitii manii nyataa akaa chufamuu hagaa April 7 tti.
Itti gaafataman waldaa mana nyaata akka jedhanitti harki 20% manii nyaata kanniini debi’u dhabuu mala jedhaniiru.
Nebraska keessatti, unemployment kaan guutate nama 16,000 gahee jira. Namni 799 waan torbaan tartee irra calaa dabalamee.
South Dakota keessati namaa 1,700 olkan ta’an hojii dhabdummaa kan gutatanidha. Waan turban tartee irra harka 907% kan dabalee ta’uu himame.
Sababa dhukuba corona virus irraa kan ka’ee magaalan Sioux City dhaabata garii cufani jiruu. Dhabanii kunnin kan akka City Hall, Long Lines, Public Museum fii Art Center kan ta’aniidha.
Garuu magalaan guutun hin cufamtu beelaman nama gabaabsani akka dalagamu taasifame. Kan hin cufamne kaa akka ummata hura guru, geejiba ummata fi buufata xiyyaara qofa.
Bakkeewan kan akka ifaa, bishaan fi parking itti kafalan hanga Aprlil 30 kafaluuf yoo turtaan qixaatin kaffalti hin jiru jedhani jiruu.
Featured ProgramsLocalIowaNebraskaSouth DakotanewsCoronavirusCOVID-19Oromo
Dukubni karona vayrasii kuta Iowa keessatti namaa haga 179 gahe jiraa.Mana yalla kaa kutaa Iowa kessaa jiruu akaa jedhanitti, garaa namotaa 34 dabalataan…